Fumana ukucocwa kweCouta kulwazi lwe-RealtyWW
Fumana uCouta Ukucoca
Isikhephe i-couta luhlobo lwesikhephe esihamba eVictoria, e-Australia, sijikeleza iSorrento kunye neQueenscliff kunye nonxweme oluseNtshona yeVictoria ukuya ngasentshona ePortland. Yayisetyenziswa njengesikhephe sokuloba ngokwesiko ukujikeleza ngaselunxwemeni ukusuka kwi-1870 kude kube kwii-1930s, nangona sasinda njengesikhephe sokuloba kude kube kwii-1950s. Isikhephe i-couta siphuhliselwe ushishino lokuloba elunxwemeni kwinkulungwane ye-19th. Abalobi abasukelwa ziintlanzi badla ngokuchazwa ngokuchanekileyo njenge- 'barracouta'; ukudideka kunye neendidi ezikhulu zelwandle barracuda. Izikhephe zeCouta zibambe uhlobo "lweThersites atun") kodwa ookopolotyeni babeka iiqua zokulawula amaxabiso, kwaye yiyo le eyakhokelela kwimfuno yesantya kwisikebhe esihle sokuloba. Izikhephe ziye zisiya kumhlaba wokuloba ngaphambi kokusa, uninzi lungena ngesango lokungena ePort Phillip, elixekekileyo nelidla ngokukhohlisa, apho kwakuqinisekiswa khona izikhephe zecouta yolwandle. Nje ukuba inani labo le-barracouta lifezekisiwe, abalobi bajika imizamo yabo yokubuyela ngomva kwisango ngokukhawuleza njengoko babenako - isikhephe sokuqala sibuyisele amaxabiso awona aphezulu. Nangona umthwalo wokuthwala umthwalo ububalulekile, imfuno yesantya esiphantsi kwesikhephe ibiyimpawu efunekayo. Isikhephe esiqhelekileyo se-couta sasiphatha i-gaff ngesikhephe kunye nejib sibekwe kwindawo ende yokugquma, nangona isikhephe esikhulu saphuhliswa saya kwisikhephe esinompu, kuba sinomphambili okanye iyadi ephezulu kakhulu. I-rig ekhethekileyo kwisikhephe se-couta savela, eyathi yavumela ukuhamba ngenqanawa ukuba ibe phezulu kakhulu kunangaphambili, kwaye yayiquka nendawo efihliweyo engaphantsi. Njengeenqanawa zorhwebo ezifanelekileyo nezikhuphisanayo zokuloba, i-couta izikhephe zafikelela encotsheni yazo zijikeleze ii-1920 kunye nee1930s. Emva kweMfazwe yesibini (II) yeHlabathi, ukuphuculwa kweenjini kunye nokukhula kukhetho kukawonkewonke okokrebe kuqala ukutyhala isikhephe couta ukusuka kwinqanaba lesigaba. Isikhephe i-couta saba lixhoba lokuphuculwa kweshishini lokuloba emva kweMfazwe yesibini yeHlabathi, kwaye yasinda ngenxa yemizamo yeqela elincinci labantu abanolwazi oluqinisekileyo lwembali nokunconywa ngokusebenza kwezithethe zaselwandle. Ukuphendula ukungafezeki okucacileyo wokuba ezi nqanawa zahlukileyo ziya kunikezelwa kumgangatho wenqaku kwimbali yokuhambisa elwandle eOstreliya kwaye mhlawumbi zinyamalale ekubonakaleni, ukusuka ngasekupheleni kwe1970s ukuya phambili, amagorha ambalwa azinikeleyo azimisele kwaye abuyisa izikhephe zentsingiselo yecouta esele isekhona. ukutsiba okanye ukuphakanyiswa kwiindawo ezingasemva konxweme. Ngelixa bengazange bafumane ukwamkelwa ngokusesikweni, izenzo zabo zamagorha zihlala ziqinisekisiwe ngonaphakade kwi-psyche yase-Australia. Obu buchule bokuloba bokusebenza phakathi konxweme lwamanzi olwandle, isantya kunye nomthamo wokwenza ukuba kube yindawo yokuphumla yokuhamba ngesikhephe ngeli xesha. Izikhephe zeCouta zifunwa kakhulu kwaye zikhuphisana ngokukhuselekileyo kubuhlanga. Uninzi lwakhiwe lutsha ukusuka ekuqaleni, njengoko ubonelelo lwentsusa luphelile. Kukho iklabhu ye-couta yesikebhe eSorrento kunye nenye eQueenscliff.